Nkewa bụ maka njikọta kacha mma-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Nkewa bụ maka njikọta ka mma
A na-eji agba dị na August mee ọla edo, na-egbuke egbuke ma dị oke ọnụ; agba agba nke August sitere na anyanwụ, na-esi isi ọma ma maa mma. N’ụtụtụ, dị ka nwatakịrị na-eteta mgbe ụra ji abalị, enwere ike na ume ebe niile. Okooko osisi, ahịhịa, dị nro ma na-acha akwụkwọ ndụ, nke na-eme ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala. Morningtụtụ ọma mara mma na-enye anyị mmalite dị ebube.
Ifufe dị na Ọgọstụ adịkwaghị nro, ya na iwe na-enweghị isi, ọbụnakwa jiri ikuku na-enweghị ịdọ aka na ntị. Oge ọkọchị a ga-enwe mwute. Nzute gara aga bụ naanị maka nkewa na August. Agbanyeghị, ọfụma a bụ njikọta ọzọ.
N'oge a, oge okpomọkụ nke egbe egbe na-agwụ ike malitere, na mkpọtụ nke egwu egwu na-abanye na mgbakasị nke oge ahụ. N’ebe na-enweghi ndidi, ka ọ na-aka ekpo ọkụ, obi agaghị adị jụụ ma emesịa. Ugboro ole na ndụ, ọtụtụ nsogbu, enweghị ike ịhapụ obi, ịhapụ naanị ga-eme ka iwe ahụ dịkwuo elu. Lelee nkewa site n'obi nkịtị, ikekwe n'oge ọkọchị a, enwere ice pụrụ iche, nke a kwesịrị ịdị jụụ ma dịkwa mma. Ọbụghị nkewa ọhụụ anaghị ahụ ọzọ, enwere m gị n'ime obi m, gịnị kpatara m ji echegbu onwe m maka gị na gị iche. Nkewa ma ọ bụ owu ọmụma, ọ bụrụhaala na anyị echefughị ​​ibe anyị.
Ikekwe na ihe nkiri a dị iche, ọ bụ baptizim nke mkpụrụ obi. Zute ozo, mu na gi abughi ndi mbu. Anyị agakwaghị enwe mwute na nkewa, na nkewa ga-eme ka anyị jiri mmetụta siri ike a kpọrọ ihe. Mgbe ụfọdụ, nkewa dị mkpirikpi bụ ọdịda nke mmetụta uche, ọ bụghị ịsọfu uzuzu ya; ma mekwuo mmetụta miri emi dị n'etiti mụ na gị, na-enweghị okwu, anya, ihe, ị nwere ike ịghọta uche onye ọ bụla. nkewa bụ ka mụ na gị matakwuo ibe anyị nke ọma, zute ọzọ, atụ uche ga-asọba dịka ebili mmiri, achọghịzịkwa ịma ihe gara aga, naanị chọọ obere oge ịtụkwasị ibe anyị obi.
Ndụ na-achụso izu oke mgbe niile. Nkewa bụ ịhapụ oghere maka iche echiche ma gbalịsie ike maka onwe gị zuru oke. Chere ruo mgbe ị ga-ezute ọzọ, ikekwe ị ga-eche etu omume mbụ gị si bụrụ ihe nzuzu. Ọtụtụ mmadụ na-achọkarị ịdabere na ibe ha. Agbanyeghị, mgbe ogologo oge gachara, esemokwu ga-apụta nwayọ. Ya mere, gịnị kpatara oge nkewa, Ọ bụrụ na ịhụnanya dị n'etiti abụọ ga-adịgide ruo afọ, gịnị kpatara ha ga-eji nọrọ ọnụ abalị na ehihie?
Ezi ihe niile ga-abịa na njedebe, mụ na gị ga-ekewa ụzọ. N’ọnwa Ọgọst, oge ọkọchị a dị nwute, emere oriri. A oge nkewa, ahịrị abụọ nke anya mmiri, dị nnọọ jụụ m na-ahapụ m, dị ka nwayọọ dị ka m bịara ebe a; jiri nwayọ m fụgharịa aka uwe m, agaghị m ewetakwa ya ọ bụla.
Previous: Mbido nke Mgbụsị akwụkwọ
Ọzọ: Ememme zụta Septemba